ချစ်ကြည်အေး: September 2014
တိုက်ခန်းနဲ့ ဟန်းနီးမွန်း၊ ပျားရည်ဆမ်းခရီး…ဘယ်ဟာကို ရွေးချယ်မှာလဲ ?
စေ့စပ်ထိမ်းမြားလက်စွပ်ကို ယူမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အပေါင်ဆိုင်မှာထားပြီး အပေါင်ငွေနဲ့ အ်ိမ်ခြံမြေခြံမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှာလား….
လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်း မြန်မာ့အွန်လိုင်း အိမ်ခြံမြေခြံရောင်း လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Houseမှ အမေရိကန်နိုင်ငံ Era Real Estateရဲ့ လေ့လာသုံးသပ်ချက်ကို ပြန်လည်ပြီး သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
စာရင်းကောက်ချက်အရ အမေရိကန်အမျိုးသမီး၅၀%ဟာ သူတို့ရဲ့စေ့စပ် ထိမ်းမြားလက်စွပ်ကို အပေါင်ခံပြီး အိမ်ခြံမြေခြံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ အားသန်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပိုပြီးအံ့သြစရာကောင်းတာကတော့ ၅၀%ထဲက ၁၇%ဟာ အပေါင်ဆိုင်မှာ သူတုိ့ရဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ် ကို ပေါင်ထားပြီး တိုက်ခန်းအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောကြားခဲ့တာပါ။
နောက်ပြီး Era Real Estateမှ ကျန်တဲ့ ၅၀%ကို ပျားရည်စမ်းခရီး သွားမှာလား ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ့ကုန်ကျစရိတ်အစား အပေါင်ဆိုင်မှာထားပြီး တိုက်ခန်း ကွန်ဒိုငှားမှာလား၊ ၀ယ်ယူမှာ လားဆိုတော့ ၁၆ % က Honeymoonခရီးစဉ်ကို အစတေးခံပြီး တိုက်ခန်းအငှားလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်။
Era မှ ယခုလို သံယောဇဉ်ခိုင်မာစွာရှိနေကြတဲ့ စုံတွဲပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို စာရင်းကောက်လိုက်ရာ Houseရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အရ ယနေ့ခေတ်မှာ အိမ်ရာတိုက်ခန်း ဈေးနှုန်းများရဲ့ အခြေအနေဟာ ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ ရှေ့အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်လိုက် ပါတယ်။
ကောက်တမ်းစာရင်းဝင်ဖြေဆိုခဲ့တဲ့ ၉၀ %ကတော့ “အိ်မ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အတူဝယ်ခြင်းဟာ ချစ်သူစုံတွဲတွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ရှေ့ရေးကို ပိုပြီးဖြောင့်ဖြူးစေတယ်လို့” ဖြေကြားသွားခဲ့ပါသတဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စေ့စပ်ထိမ်းမြားလက်စွပ်ရဲ့တန်ဘိုးဟာ အိမ်၊တိုက်တာတန်ုဖိုးတစ်ခုကို ၀ယ်ယူနိုင်တဲ့ ပမာဏ မရှိတဲ့တိုင်အောင် အရေးအကြောင်းဆိုရင် ရောင်းဝယ်၊ ပေါင်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ တကယ်ပဲ မိမိရဲ့ ချစ်သူပေးထားတဲ့ စေ့စပ်ထိမ်းမြားလက်စွပ် သို့မဟုတ် မင်္ဂလာလက်စွပ်ကို စွန့်လွှတ်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရှိလာပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ကတော့ စွန့်လွတ်တယ် မစွန့်လွတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ စစ်မှန်နက်ရှိုင်းတဲ့မေတ္တာပေါ်မှာ မူတည်သလို၊ တခါတလေမှာ သားကောင်ချနင်းရတဲ့သဘောလို့လည်းမြင်မ်ိပါတယ်။
စာရေးသူအမေဟာ မုဆိုးမပါ။ မောင်နမသုံးယောက်ရဲ့ မိခင်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၅နှစ်လောက်တုန်းက အဖေဆုံးသွားပြီးကတည်းက အမေဟာ သားသမီးသုံးယောက်ကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ကျောင်းပြီးအောင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တော်တော်ခက်ခဲတဲ့ဘ၀ကို အမေကျော်လွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းဆရာမဘ၀နဲ့ လယ်စိုက်၊ နွေဦးရောက်လာရင် မြေပဲနုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးသူက ၁၀နှစ် သားလောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဖေဆုံးသွားပြီး အမေဟာ ဆရာမတစ်ယောက်အနေနဲ့ မလုပ်ဖူးတဲ့ အလုပ်ကြမ်းတွေကို လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေဟာ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှစ်မသုံးယောက်ကို ကျောင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ရတဲ့အထိထားခဲ့ပါတယ်။ မုဆိုးမဖြစ်တဲ့အမေဟာ ယနေ့တိုင်အောင် အဖေပေးထားတဲ့ မင်္ဂလာလက်စွပ်ကို ၀တ်နေဆဲပါပဲ။ ခုဆိုရင် အမေဟာ ပြည်ပရောက်ပြီး သားသမီးတွေရဲ့ အရိပ်အ၀ါသအောက်မှာ ကောင်းကောင်းနေနိုင်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပရောက်မြန်မာကလေးများကို မြန်မာစာသင်ပေးနေတဲ့အလုပ်ကို အသက် ၇၀ နီးပါးရောက်သည့်တိုင်အောင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲပါ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်း ဂုဏ်ယူနိုင်စရာ မိခင်ဖခင် သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်သည်များ တကယ်ပဲ ရှိကြအုံးမှာပါ။
ခေတ်အခြေအနေ ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ လူငယ်တွေရဲ့ အမြင်ပိုင်းတွေဟာလည်း ကွာခြားလာခဲ့ပါပြီ။ သို့ပေမယ့်လည်း စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ ဒုက္ခများကို သတ္တိရှိရှိ အတူတကွ ကျော်လွားနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒါမှသာလျှင် ဘ၀ဟာ ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်လို့ စာရေးသူအနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။ စာရေးသူပြောတဲ့ ဟန်းနီးမွန်းသွားမှာလား၊ တိုက်ခန်း ၀ယ်၊ ငှားမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ တကယ်တော့ ရင့်ကျက် ထက်မြက်တဲ့သူ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ အတွက်တော့ ဖြေဆိုရဖို့ အခက်ခဲသိပ်မရှိလှပေမယ့် အချို့သောသူများအတွက်တော့ စိမ်ခေါ်ရင်ဆိုင်မှုတခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သည်လိုအခြေအနေ မျိုးမှာ တခြားနည်းလမ်းများ၊ ရွေးချယ်ဖြေရှင်းချက်များ ရှာတတ်ဖို့လိုမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ခေတ်သစ် မိသားစု၊ စုံတွဲများ သစ္စာရှိရှိ ရာသက်ပန် ဆက်လက်လျှောက်သွားနိုင်ရန် ရည်စူးလျှက် အခက်ခဲများကြုံလာပါကလည်း စစ်မှန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းသွားကြရအောင်လို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း လိုက်ရပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ ကျွန်မရဲ့ စာတိုက်ထဲကို တစ်နေ့က စာလေးတစ်စောင် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူက ကျွန်မဘလော့ဂ်ကို ဖတ်တယ်။ ကျွန်မစာတွေကိုလည်း နှစ်သက်သဘောကျတယ်လို့ ဆိုလာပြီး ခင်မင်စွာ မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူရေးထားတဲ့ အထက်က စာလေးကို ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ ဧည့်သည်စာရေးသူအဖြစ်နဲ့ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက် ဒီပိုစ့်လေး ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
အိမ် ခြံ မြေနဲ့ ပါတ်သက်လို့ တခုခု အကူအညီ၊ အကြံဉာဏ်များ လိုကြတယ်ဆိုရင်ဖြင့် အထက်မှာပါတဲ့ HOUSEလိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်နိူင်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်တဲ့ အခါသမယမှာ အာဝါဟ ဝိဝါဟကြတော့မယ့် ချစ်သူများအတွက်ပါ။ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကျွန်မကိုလည်း ပွဲခလေးပေးဖို့ သတိရပေါ့ရှင် :)
နောက်တာပါ....။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေအောင်မြင်ကြပါစေ.... :)
မိုးက ခုတလော ထစ်ချုန်း၍ ချုန်း၍ရွာသည်။
ရွာသောမိုး၌ လျှပ်တို့ ဝင်းဝင်းလက်လက်ပြက်သည့်အပြင် ရံခါချိန်းတတ်သောမိုးကြိုးများကြောင့် သူမ၏အခန်းငယ်လေးမှာ လင်းတခါ မှောင်တလှည့်ရှိရသည်။ မိုးသည် လေနှင့်အတူ သည်းသည်းစွေရွာနေလေ၏။ ထိုမိုးအောက်မှာ အပင်ငယ်လေးများသာမက သစ်ပင်ကြီးတို့ပင် ဆောက်တည်ရာမဲ့ ယိမ်းထိုးလျက်ရှိသည်။။ မိုးနှင့်သစ်ပင်တို့ စည်းချက်ကျကျ ဘယ်ညာယိမ်းထိုးနေသည့် မြင်ကွင်းကို သူမပြတင်းပေါက်ကလေးက အနားသတ်လို့ပေးထားသည်။ ထိုပြတင်းပေါင်မှ ဘောင်ခတ်ပေးထားသည့်မြင်ကွင်းကလေးထဲ သူမမျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ထားလိုက်မိသည်။
မိုးစက်မိုးပေါက်ကလေးများသည် မြေပြင်ပေါ်သို့ တည့်တည့်သက်ဆင်းရသည်တော့ မဟုတ်၊ လေ၏ဆောင်ရာအတိုင်း မြေပြင်ညီနှင့် ခပ်စောင်းစောင်းတိမ်း၍ ကျရရှာသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မိုးပေါက်ကလေးများသည် သူမပြတင်းဘောင်အပေါ် လွင့်ကနဲ လွင့်ကနဲ ဖွာစင်လျှက်ရှိသည်။ အရာရာသည် ဝေဝေဝါးဝါး…။ မျက်ခွံများကို တင်းတင်းပိတ်လိုက်ကာ ပြန်အဖွင့်၌ အားယူ၍ အပြင်ဘက်သို့ ကြည့်လိုက်မိပြန်သည်။ မြင်ကွင်းသည် ပြတ်သားမလာ၊ ပြောင်းလဲမသွား၊ ဝေဝါးဆဲပေ။
ရေမှုန်တွေကြောင့်လား၊ သူမမျက်ဝန်းတွေကြောင့်လား…၊ သစ်ပင်များသည် ဘယ်ညာသို့ ကြမ်းတမ်းယိမ်းနွဲ့နေသော အုပ်အုပ်ခဲခဲများ၊ ဒေါင်လိုက်ခပ်စိမ်းစိမ်းများသာဖြစ်လို့နေသည်။ အပင်သေးများ၊ အပင်ကြီးများ၊ ရှည်လျားပင်များ၊ ပုပြတ်သောအပင်များ…၊ အားလုံးသည် သူမမျက်ဝန်းအိမ်ဝယ် ပြယ် လွင့်နေသော ရေဆေးပန်းချီကား တစ်ချပ်လှုပ်ရှား သက်ဝင်နေသည့်နှယ်။
ဒေါ်ထွေး ဒေါ်ထွေး ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်၊ တအိမ်လုံးမှာ သူမ တယောက်ထဲများလား။ နေ့လည်ခင်းမို့ တရေးတမော ပြန်လည်အိပ်စက်နေသည်ထင်၏။ နေပါစေလေ၊ မိုးပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို သူမ ငေးလျက်နေချင်သေးသည်။ ပြတင်းပေါက်အား ပိတ်မပစ်လိုက်ချင်သေး။
ထိုမိုးထဲမှာ သူမ ပျော်ခဲ့ဖူးသည်။ ထီးတချောင်းကို လက်ကကိုင်လျက်နှင့်ပင် ရွှဲရွှဲစိုခဲ့ဖူးသည်။ သည်လိုစွေစောင်း၍ရွာတတ်သော မိုးထဲမှာ…။ နှုတ်ခမ်းများပြာကာ မေးရိုက်အောင် တဂတ်ဂတ်တုန်ခိုက်နေသည့်ကြားမှာပင် သူနှင့်မို့ သူမက အိမ်မပြန်ချင်။ အားနာ၍ဆိုကာ သူမထီးအောက်ကို သူက ခိုဝင်မလာသောအခါ သူမက ထီးကို ကိုင်ကာမတ္တမျှ၊ လူကမူ ထီးပြင်ထွက်ကာ သူနှင့်အတူ မိုးစက်များအောက် ခေါင်းမော့လျှောက်လေသည် တဲ့။
သူမတို့ စကားပြောဖြစ်ကြစဉ် သည်အကြောင်းကို သူမကပြောပြတော့ သူ ခပ်ဖွဖွလေးရယ်မောသည်။ စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာဟု ဆိုသည်။ ဘာဖြစ်လဲ၊ တွေ့ကြတဲ့အခါ အဲသလိုမိုးတွေ သည်းနေပါစေ ဆုတောင်းတယ်ဟု သူမက ထပ်ဆင့်ဆိုလေသော် သူသည် ပြောစကားနားမထောင်သော ကလေးတစ်ယောက်အား အလိုလိုက်ထားရသလို သူမမျက်နှာကိုငေး၍သာ ကြည့်လေ၏။ ထိုအကြည့်မှာ သူမ အရည်ပျော်ကျမြဲ။ ထိုအကြည့်မှာ သူမ ရူးသွပ်မြဲဖြစ်သည်။ သူ သူမမျက်နှာကို အဲသလိုငေးကြည့်တိုင်း သူမနှလုံးသားတွေကိုများ ထွင်းဖောက်ကာ မြင်သွားတော့မှာလား တွေးရှက်မိရသည်။
သူငယ်ချင်းကလေးဟု သူမကခေါ်လျှင် သူက စိတ်ကောက်ဟန်ပြသည်။ ဒါဆို ဘာလဲ၊ ကျွန်မတို့တွေက ဘာလဲ ပြောပါဦးဟု သူမနှုတ်ဖျားမှ ဖွင့်မေးလျှက် စကားလုံးများနှင့် မချုပ်လို။ ရှိစေ…။
သတိတွေသိပ်ရတဲ့အခါ စကားတွေပြောကြတာပေါ့ဟုဆို၍ ဗီဒီယိုကောလ်ရသော အကောင့်တခုကို သူမ ဖွင့်ခဲ့ဖူးသည်။ ­­ပထမဦးဆုံး သူ စတင်ခေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ကို သူမ ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါသည်။ ထိုနေ့က သူမ ရေမချိုးရသေး။ အဆီပြန်နေသော မျက်နှာ၊ အိမ်နေပါတိတ်အနွမ်းလေးနှင့် ဆံပင်ဖားဖားချကာ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်၊ ကဗျာတပုဒ်ထဲ ဈာန်ဝင်ဖတ်နေခိုက်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူမျှခေါ်ယူခဲ့ဖူးခြင်းမရှိ၍ တခြားဖုန်းသံများနှင့်ကွဲသော ထိုဖုန်းမြည်သံကိုကြားစဉ် ပထမတော့ အံ့သြကာ ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ငေးကြောင်ကြည့်နေမိသေးသည်။ ဖုန်းစကရင်ပေါ်မှာ သူ့နာမည်မြင်လေမှ ကသုတ်ကရက် ဖုန်းပြန်ထူးရလေသည်။
ဖုန်းစကရင်ပေါ်မှာ သူ့ကိုမြင်ရစဉ် သူမစိတ်တို့ ခုန်လှုပ်နေခဲ့သည်မှာ စကားလုံးများနှင့်ပြရလျှင် မည်သို့မျှ ရေးချနိူင်ဖွယ် မရှိ။ သူ့ဓါတ်ပုံ၊ သူမဓါတ်ပုံ ပေးပို့လဲလှယ်ခဲ့စဉ်ကနှင့် မတူ။ သူက သူမရှေ့မှာ၊ သူ့အပြုံးတို့က ချိုမြကာ၊ သူက သူမဖုန်းစကရင်ပေါ်မှာ လွန့်လွန့်လှုပ်ရှားနေခဲ့သော အသက်ဓါတ်တခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် စကားပြောတတ်သော ပုံရိပ်ယောင်၊ သူသည် လူကြီးဆန်ပုံ ဖမ်းလျက်က စိတ်လိုလက်ရဆိုးတတ်သော ညစ်ကျယ်ကျယ်ကလေးလည်းဖြစ်သည်။ သတိရတယ်၊ သူငယ်ချင်းတယောက်လို သတိရတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဟု သူဆိုလာလျှင် သူမက သူ့ကို တဖန် ငေးကနဲကြည့်မိပြန်သည်။ သို့တိုင်အောင် ဒါဆို ဘယ်လိုသတိရတာလဲ ပြောဟု သူမ မမေးဖြစ်ခဲ့။ စကားတွေ မပြောဖြစ်ကြဘဲ နှစ်ယောက်သားကိုယ်စီ အတူတူရှိနေသည်ဟူသော အသိနှင့်သာ၊ တယောက်မျက်နှာ တယောက်ငေးကာ နေခဲ့ကြဖူးသော အချိန်များ….များစွာ။
မိုးသည် ဘယ်အညှိုးနှင့် စွေလေသည် မသိ။ သည်း၍ သည်း၍သာ လာသည်။ သူမမျက်ဝန်းများရှေ့မှာ မိုးရေစက်တွေလား၊ ပြတင်းနှင့်ဘောင်ခတ်ထားသော ပန်းချီကားတချပ်လား၊ ယိမ်းထိုးသစ်ပင်ကြီးငယ်များလား။ တကယ်တော့ ဘာဆိုဘာမှ မသဲကွဲပြန်ချေ။ ပြတင်းပေါက်ကလေးမှတဆင့် ကျော်ကြည့်နေသော ပြင်ပမြင်ကွင်းများကိုလည်း မမြင်၊ ပြတင်းပေါက်ကလေး ဘေးကြမ်းပြင်မှာ မိုးရေများနှင့် စိုရွှဲနေသည်၌လည်း အာရုံမရောက်၊ သူမမျက်ဝန်းနှင့်ထိုမြင်ကွင်းအကြား ကြားခံလေထုကိုမှ ရှိနေသည်ဟုသာသိလျက် ပြတင်းပေါက်ဘောင်ကလေးထဲ သူမစိတ်တို့ လွင့်ထွက်သွားပြန်သည်။
သိကျွမ်းခဲ့ကြတဲ့ တနှစ်ပြည့်အမှတ်တရကျရင် တွေ့ကြမယ်လေဟုဆိုတော့ သူက ပြုံးလျက် ခေါင်းညိတ်သည်။ ဒီမှာကြည့် လေယာဉ်လက်မှတ်ဟုဆိုကာ သူ့ခရီးစဉ်ကွန်ဖမ်းဖြစ်သည်ကို စာတိုလေးတစောင်နှင့်အတူ ပို့လာခဲ့စဉ် သူမက ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုပ္ပဏီတခုသို့ဖုန်းဆက်ကာ ရီဇာ့ဗ်လုပ်ထားပြီးဖြစ်သောလေယာဉ်လက်မှတ်ကို ချက်ချင်းပင် ငွေချေကာဖြတ်လိုက်ခဲ့လေသည်။ ထိုလေယာဉ်လက်မှတ်၏ ထွက်ခွာရက်စွဲကလေးကို သူမပြက္ခဒိန်မှာ မင်နီဝိုင်းလျက် ကောင့်ဒေါင်း လုပ်၊ ပျော်ခဲ့သည်ကို သူမ မမေ့။
သည်ကြားထဲ ဖုန်းမခေါ်ကြကြေးဟု သတိရစိတ်တွေကို စုထားဖို့ သဘောတူခဲ့ကြသည်။ အဲသည်ရက်တွေမှာ သူ့ကို သူမ သေလောက်အောင်လွမ်းဆွတ်လို့နေခဲ့သည်။ လက်မှတ်လေးကို ခဏခဏထုတ်ကြည့်လိုက်၊ ပြက္ခဒိန်ပေါ်က မင်နီဝိုင်းလေးကို လက်ဖျားနှင့် ထိကြည့်လိုက်နှင့် သတိတရစိတ်များက သူမကို စေးစေးပိုင်ပိုင်လောင်မြိုက်လျက်ရှိလေ၏။
ထိုကဲ့သို့သတိရချိန်တိုင်းမှာ သူမက သူမဘယ်ဘက်လက်ထိပ်ကလေးများကို ညာဘက်လက်ချောင်းများနှင့် တချောင်းချင်းစီ ထိလို့ ထိလို့ နေခဲ့သည်။ ဘယ်ဘက်လက်ညှိုးထိပ်ကလေး၊ လက်ခလယ်ထိပ်ကလေး၊ လက်သူကြွယ်ထိပ်ကလေး၊ လက်သန်းထိပ်ကလေး…တချောင်းချင်းစီ ထိတွေ့ကြည့်လျက်က လက်ထိပ်ကလေးများ၏ မာကြောကြမ်းရှသောအတွေ့မှာ သူ့ကို လွမ်းရသည်။ ထိုလက်ထိပ်ကလေးများနှင့် ဂစ်တာကြိုးတို့ကို ဖိကိုင်လိုက်လေတိုင်း စူးနင့်သွားတတ်သောရင်ဖြင့် သူ့ကို တမ်းတရသည်။ ရိမ်မိုးသီချင်းသံကိုကြားလေတိုင်း ဝေသီလာတတ်သောမျက်ဝန်းများနှင့် သူ့ကို ပြင်းပြင်းရှရှ သတိရ ရပါသည်။
ခရီးသွားဖို့ အထုပ်ပြင်ပြီးသောအခါ လိုအပ်မည်ထင်သည်များကို စာရင်းတို့လျက် ထပ်မံထည့်လိုက်၊ မလိုဘူးထင်သည်များကို ပြန်ထုတ်လိုက်နှင့် ကြည်ကြည်နူးနူးအလုပ်ရှုပ်နေရသည်ကိုပင် သူမ ကြည်မွေ့လျက်ရှိခဲ့သည်။ သူ ပေးပို့ဖူးသော ကဗျာများအား အေဖိုးစာရွက်နှင့်ထုတ်ကာ အတူတူဖတ်ကြဖို့ သူမ ဘေးလွယ်အိတ်ကလေးထဲ မှတ်မှတ်ရရထည့်ရသည်။ သူ့ဓါတ်ပုံကလေးကို ကာလာလိုင်စင်ပုံအဖြစ် သူမပိုက်ဆံအိတ်အသေးလေးထဲမှာ သူမပုံနှင့်ယှဉ်လျှက်ထည့်ဖို့ကိုတော့ ရှက်ရွံ့စွာ စဉ်းစားတုန့်နှေး နေမိတုန်းပေ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူမစိတ်ကို ဖတ်တတ်လျှင်တော့ သူ သိမည်ပါ။
လေဆိပ်ကို ခြေချမိသည်နှင့် သူမ ပထမဦးစွာ ဆုံချင်သည်က သူ့မျက်ဝန်းများနှင့်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ဝယ်ယူထားသော ဖုန်းကဒ်ကို ဖုန်းထဲသို့လဲလှယ်ထည့်စဉ်မှာပင် သူမလက်တို့ တုန်ယင်လျက်ရှိသည်။ ပြီးတော့ ဖုန်းထဲမှာရှိနှင့်သော သူ့နံပါတ်ကိုအနှိပ်မှာ သွေးတို့ နွေးလျက်ရှိပြီ။ လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာနှင့်…အစချီသောဖြေသံကို မုန်းတီးသွားလိုက်သည်မှာ ဆိုဖွယ်ရာမရှိ။ ပစ္စည်းများရွေး၍ လှည်းပေါ်တင်တွန်းကာထွက်လာခိုက် သူမမျက်ဝန်းများက အပြင်မှာ ကြိုစောင့်နေကြသူတွေဆီ ဖြတ်ပြေးလျက် မြင်လိုသောမျက်ဝန်းတစုံကို အလူးအလဲဖွေရှာမိပြန်သည်။
သုံးခါတိတိခေါ်ဆိုပြီးသော်မှ တဘက်က မထူးသည့်အခါ အလိုလိုမျက်ရည်လည်ချင်သည်။ သူ မေ့များနေပြီလား။ သေချာပြောထားလျက်နဲ့၊ လေယာဉ်လက်မှတ်က အချိန်ကို သူသိအောင် ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပါလျက်နဲ့….။ ဝမ်းနည်းစိတ်ကြောင့် မျက်ရည်တို့က ပါးပြင်ပေါ်လိမ့်ဆင်းလို့လာသည်။ တွေ့ရာတက်ကစီတစီးပေါ်တက်ကာ အိမ်လိပ်စာပြောပြီး ကားပေါ်ရောက်သည့်တိုင် စိတ်တို့က မကြေလည်ချင်သေး။ သို့တိုင်အောင် အိမ်သားတွေကို လာမကြိုဖို့ပြောထားသည်ကိုမူ နောင်တမရချင်ပါ။ လမ်းတလျှောက် ဘေးဘီဝဲယာကိုမျှ မကြည့်လိုတော့အောင် သူမ ဝမ်းနည်းလျက်ရှိသည်။ သူ့ကို ပထမဦးဆုံးတွေ့ဖို့ရာ ဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ထားသည်ကို သူမသာ အသိဆုံးဖြစ်သည်လေ။
သည်အခိုက်မှာ ဖုန်းမြည်လာလေသည်။ ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုသည့် သူ့အမေး၌ မျက်ရည်တို့ အံ့သြစဖွယ် သွေ့ခြောက်သည်။ တက်ကစီပေါ်က ဆင်းလိုက်၊ ရောက်တဲ့နေရာပြော၊ လာခေါ်မယ်ဆိုသည်ကို နေပါစေတော့၊ အိမ်ရောက်တော့မှာဟု ပြန်ဖြေမိသည်။ ဒါဆိုလည်း နောက်နေ့တွေ့ကြမယ်လေနော် ဆိုသောစကားအကြားမှာ ရင်က ဟာကနဲ ဗလာကျင်းသည်။
တကယ်ဆို သူ သိဖို့ကောင်းသည်။ နောက်တနေ့ဆိုတာက နောက်တနေ့သာရယ်၊ သူ့ကို တွေ့ချင်ခဲ့သည်က သည်နေ့၊ သည်အချိန်၊ အခုရောက်ရောက်ချင်း…။
သည်လိုအမှတ်တရမျိုး ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိူင်သည်ပဲ။ လေဆိပ်ရောက်သည်နှင့် သူ သူမကို အပြုံးမြမြနှင့်စောင့်ကြိုနေလိမ့်မည်ဟူသော မျှော်လင့်စိတ်တို့ တိတ်တိတ်ကြေကွဲရသည်။ သူ သိမည်မဟုတ်။ ရှိစေတော့ကွယ်…။ နှောင်ကြိုးတခုချည်နှောင်ရာမှာ တင်းတင်းချည်မိသူသာ နာကျင်ရစမြဲ။
အဲသည့်အိပ်မက်၊ အဲသည့်အိပ်မက်ပေါ့၊ ဖုန်းမခေါ်ကြေးဆိုသည့် စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်ပြီး အိပ်မက်ကို ပြောပြချင်လွန်းလို့ဟု အကြောင်းပြကာ သူ့ဆီ ဖုန်းဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်။ သူက ကလေးတယောက်လို ရယ်မြူးကာနှင့် အေးကွာ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် လွဲရတယ်လို့ကွာ၊ နောက်မဖြစ်စေနဲ့ ကြားလားဟုဆိုတော့ သူမတို့ ပေါ့ပါးစွာ အတူရယ်မောဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
မိုးသည် သည်နေ့တော့ တနေ့ခင်းလုံးရွာမည် ထင်သည်။ ကောင်းကင်ကို သဲကွဲစွာမမြင်ရသော်မှ မှောင်လျက်ရှိသောအခန်းငယ်လေးကိုထောက်ကာ မည်မျှမည်းညို့၍နေမည်ကို မှန်းဆရသည်။ ပက်လက်အနေအထားမှ ကိုယ်ကိုစောင်းကာ ပြတင်းပေါက်ဘက် မျက်နှာတည့်တည့်မူလိုက်ရင်း စောင်ကို ရင်ဘတ်ပေါ်ထိ တင်းတင်းဆွဲခြုံလိုက်မိ သည်။ အေးလှပြီ၊ ပြတင်းပေါက်မှတဆင့် မိုးနှင့်အတူ လေအေးတို့ပါ ရောနှောဝင်လာသော အခန်းကလေးက တုန်ခိုက်လို့နေသည်ပဲ။ မျက်ဝန်းများကို မှိတ်ချလိုက်တော့ မိုးရေစက်ကလေးများပင် သူမပါးပေါ် တဖွဲဖွဲလာရောက်လွင့်စင်သလို စိတ်ကထင်ပြန်သည်။
အတူတူဆုံရင် သူမ သွားချင်သောနေရာလေးတခုရှိသည်။ မြစ်ကမ်းနံဘေးကလေး တခုပါ။ သူရော သူမပါ မြစ်ကမ်းတွေကို နှစ်သက်ကြတာချင်း တူသည်။ ထိုမြစ်ကမ်းကလေးသည် သူ ပို့ပေးခဲ့ဖူးသော ဓါတ်ပုံများထဲက နေရာကလေးပါပေ။ တခါမျှပင် မရောက်ဖူးသော်လည်း သည်မြစ်ကမ်းကလေးဆီ သူမစိတ်နှင့် အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ပေါက်ခဲ့ဖူးပြီးသား။ အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့တိုင်းလည်း အဖန်အဖန်မရိုးနိူင်။ ခုလည်း သူမစိတ်တို့က မိုးသည်းသည်းတွေကြားမှာပင် အလွတ်မှတ်မိနေသော ထိုနေရာကလေးဆီ စိတ်ဦးလှည့်မိရပြန်သည်။
ထိုမြစ်ကမ်းနံဘေးက သစ်ပင်အောက်မှာ သူမ ရပ်သည်။ သူမ မတ်မတ်ရပ်နိူင်နေပြီပဲ။ သစ်ပင်၏ပင်စည်ကို မှီရန်ပင် မလိုအပ်။ သူမ မားမားရပ်လျက်ရှိနေပြီ။ မျက်စေ့ရှေ့က စီးဆင်းလျက် မှန်မှန်သွားနေသော မြစ်ရေပြင်မှာ သူမ လိုက်ပါစီးဆင်းသည်။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာပင်။ မြစ်သည် သူ့မြစ်ကြောင်းအတိုင်းသာ စီးမြဲ၊ သူ့စီးဆင်းရာလမ်းမှာ ဘေးဘီကမ်းတလျှောက်ကိုဖြင့် ထိပါးလှုပ်ခတ်သွားသေးသည်။ ထိပါးသွားသော ကမ်းတို့မှာ ကျန်ရစ်ရမြဲ၊
သူသည် မြစ်တစင်းများလား၊ မြစ်သည် ဆက်လက်စီးဆင်းမြဲ။ သူမသည်လည်း ရပ်မြဲပေ။
မြစ်သည် သူမရှေ့၌ ညိုညစ်သောအရောင် ဆင်သည်။ တနေရာရာမှာများ အရောင်ပြောင်းနေမည်လား၊ ဘေးဘီကမ်းစပ်တို့အား ကြမ်းတမ်းတိုက်စားခဲ့ဦးမည်လား။ သူမ မသိတတ်နိူင်။ မြစ်ကိုဖြတ်၍တိုက်သောလေ၌ သူမ နားခိုနေသော သစ်ပင်ကြီး၏အရွက်အခက်တို့ မြူးထူးကခုန်ကြလေ၏။ လေကြောင်းပြောင်းသည်ရှိသော် သစ်ပင်ကြီးမှာ ငြိမ်သက်ရဦးတော့မည်။ သူ လွမ်းများနေမလား…။
မိုးကလေးတစက် နှစ်စက်ကျစပြုပြီ။ သည်မြစ်ကမ်းဘေးမှ သူမ ခွာရတော့မည်။ သူမ ရပ်နေချင်သည်။ သူမ မားမားရပ်နိုင်တုန်းလေး မြစ်အား ချစ်ခင်စွာငေးမောနေချင်သည်။ အေးမြသောသစ်ရိပ်မှာ သူမစိတ်နှလုံးတို့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေချင်ပါသေးသည်။ သူ မရှိလည်း သူမဘေးမှာရှိနေသယောင်ဖြည့်စွက်ထား၍ သူမ နေပျော်ကြောင်းကိုလည်း သူ သိစေချင်ပါသည်။
အချိန်တန်ပြီ၊ ပြန်ရမည်ကို သူမ သိသည်။ ခြေလှမ်းတခု စရန် သူမရွေ့လျားလိုက်သည်။ သူမ ခြေထောက်တွေ ရွှေ့မရ။ အသက်ကိုဝအောင် ရှူသွင်းကာ နောက်တကြိမ်ကြိုးစား၍ ရွှေ့ပြန်သည်။ မရွေ့…၊ သူမခြေဖျားများက နည်းနည်းကလေးမှပင် မရွေ့ပါ။ အားကိုးလိုစိတ်နှင့် သူမရှေ့က စီးဆင်းနေသောမြစ်ကို အကူအညီရလိုရငြား ခေါ်မိသည်။ မြစ်က လှည့်၍မျှပင် မကြည့်ချေ။ မြစ်သည် မြစ်ပီပီ ရှေ့သို့သာဆက်လက်စီးဆင်းတတ်ကြောင်း သူမ ဝမ်းနည်းစိတ်နှင့် သိမှတ်ရသည်။ သူမကတော့ ထိပါးတိုက်စားခဲ့ဖူးသော ကမ်းစပ်တခုသာ။ မြစ်နံဘေးမှာ ငေးလျက် ကျန်ရစ်ရမည့် သစ်တပင်သာရယ်။ ကံကောင်းစွာပင် သူမ သစ်တပင်လို မတ်မတ်ထူနိူင်သေးသည်ပေ။
ရပ်နေရင်းမှာ သူမခြေအစုံသည် အညိုရင့်ရောင်သို့ ပြောင်းသည်။ သူမတကိုယ်လုံးသည် ကြမ်းတမ်းခက်ထရော်ကာ မာခဲလျက် အပွေးတက်လာသယောင်ရှိသည်။ သူမလက်တို့သည် အကိုင်းအခက်များအသွင်၊ သူမကိုယ်လုံးသည် ပင်စည်တခုသဖွယ်၊ သူမဦးခေါင်းဆံစများသည် ထောင်ထွက်လျက် မိုးမျှော်သောအရွက်အုပ်ဆိုင်းများအဖြစ် ကူးပြောင်းလျက်ရှိသည်။
အံ့သြမင်သက်စွာ၊ သူမ လှုပ်မရ။ သူမခြေအစုံက မြေကြီးထက်မှာ စတင်အမြစ်တွယ်ပြီ၊ သူမခြေသည်းတို့က ရှည်လျားဆန့်ထွက်ကာ မြေသားထဲသို့ ထိုးဖောက်ကုတ်ဝင်လျှက်ရှိပြီ။ သူမကိုယ်မှာ အကိုင်းအခက်များ၊ ရွက်နုများ ဝေဆာလျက်ရှိပြီ။ သူမခြေအစုံသည် မြေ၌ ခိုင်မာပေါက်ရောက်လျက်ရှိခဲ့ပြီ။ မြစ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူလျက် သူမ ရပ်နေခဲ့ပြီ။ ခိုင်မာအမြစ်တွယ်စွာ…။
ဘာဖြစ်တာပါလိမ့်ဟု မတွေးတတ်၊ ဖြစ်နိူင်ခဲလှသော ဖြစ်ရပ်တခုမှာ သူမ ခြောက်ခြားလျက်ရှိသည်။
သူမ သစ်ပင်တပင် ဖြစ်ခဲ့ပြီလား။ သူမဟာ မြစ်နံဘေးမှာ မြစ်ကိုမျှော်ငေးရင်း ရပ်နေရတော့မည်လား၊ သည်မြစ်နံဘေးမှာ သူမ နေချင်ခဲ့သည်၊ သူ့လားရာမြစ်ကြောင်းအတိုင်း စီးဆင်းသွားသည့်မြစ်ကို သူမ မျှော်ရုံ ငေးနေချင်ခဲ့သည်ပေ။ သူမ အမြဲမျှော်လင့်လိုလားခဲ့သည့်အဖြစ်ဆိုသော်ငြား လက်ရှိမှာ သူမ ငိုချမိတော့မည်။ သေချာပြီ။ သူမသည် ရပ်၍၊ ရပ်၍၊ မားမားရပ်၍သာ စီးဆင်းသွားသောမြစ်၏ နောက်ကျောကို ငေးမောကျန်ရစ်ခဲ့ရတော့မည်။
“ကလေး ကြည့်စမ်း၊ တကိုယ်လုံးလည်း အေးစက်လို့၊ ဖျားတော့မှာပဲ။ ဒေါ်ထွေးကို ခေါ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ အို…မျက်နှာမှာလည်း ရေတွေနဲ့စိုရွှဲလို့ပါလား”
သူမ ခြေထောက်တွေက မြေပေါ်မှာပေါက်ရောက်နေဆဲလို လှုပ်မရနိူင်သေး။ ဒေါ်ထွေးစကားကို ကြားသော်လည်း ခေါင်းပင်ငဲ့မပြနိူင်အောင် သူမတကိုယ်လုံး တောင့်တင်းလျက်ရှိသည်။ သူမတကယ်ပဲ သစ်တပင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလား။ ဒေါ်ထွေးက ပြောလည်း ပြော၊ လက်မှမျက်နှာသုတ်ပုဝါနှင့် သူမမျက်နှာကို ဖွဖွတို့သုတ်ကာ အပြစ်တင်သယောင်ဆိုသည်။ ပြီးတော့ ပြတင်းပေါက်ဘေးကြမ်းပြင်ပေါ်က ရေများအား ကြမ်းတိုက်ဝတ်နှင့် သုတ်နေလေသည်။
“သမီး ပြတင်းပေါက်နား ခဏလောက်ထိုင်ချင်လို့”
သူမစကားအကြားမှာ ဒေါ်ထွေးက အပြင်ဘက်ကိုကဲကြည့်ကာ စဲသွားသောမိုးကိုတွေ့မှ အေး အေး ခဏတော့ထိုင်ဟု ချစ်သနားစွာ ဆိုသည်။
သူမကွန်ပြူတာစားပွဲရှေ့ကထိုင်ခုံကို ပြတင်းပေါက်နားရွှေ့ကာ သူမကို အိပ်ယာမှ ထူထစေသည်။ ဖုန်းကိုလှမ်းယူကာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းမသိအောင် သူမ ကြည့်မိပြန်သည်။ သူမဖုန်းထဲက သူ့မစ်စ်ကောလ်တွေကို စကရင်ရှော့လေးရိုက်ကာ တခုတ်တရသိမ်းဆည်းထားသည်ကို သူ သိမည်မဟုတ်။ သူ သိလျှင်ရော ဘာများထူးခြားနိူင်ဦးမှာမို့လဲကွယ်။ နွမ်းလျဝမ်းနည်းစွာ သူမ ထိခိုက်ရပါသည်။ သူနှင့် တွေ့ကြဖို့ မလိုတော့ပြီဘဲ။ သူမဘာသာဆုံးဖြတ်ကာ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်၌ သူမတကိုယ်တည်း သေဆုံးသည်။ တကယ်ပဲ…တကယ်ပါပဲ၊ သူမဟာ သစ်တပင်သာ ဖြစ်လိုက် ချင်တော့သည်။ လူတစ်ယောက်ဖြစ်၍သာ သည်မျှနာကျင်ကြေကွဲရသည်။ သစ်တပင်သာဆိုလျင်ဖြင့် ခံစားချက်မဲ့နိူင်ကောင်းသည် မဟုတ်လား။
ပြတင်းပေါက်ဘေး ထိုင်ခုံလေးမှာထိုင်ကာ အေးမြသောလေ၏အတွေ့ကို သူမမျက်နှာပေါ် နှစ်လိုစွာ ခံယူသည်။ သူမလက်ထဲမှာတော့ ခေါ်သူမဲ့နေတာကြာလှပြီဖြစ်သော ဖုန်းကလေးကို ဖွဖွဆုတ်ကိုင်ထားမြဲ။
လေပြေကလေးတချက် သူမအခန်းထဲအဝေ့မှာ စားပွဲပေါ်ရှိ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာက စာမျက်နှာလေးတစ်ခု၊ အသေအချာဖြတ်တောက်ထားသော စာမျက်နှာလေးတခုက ကြမ်းပြင်ပေါ် လွင့်ကနဲကျသည်။ “ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေသော အမျိုးသမီးကလေးတဦးကို ဝင်တိုက်ကာ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားသောယာဉ်မောင်းအား တာဝန်ရှိသူတို့မှ လိုက်လံရှာဖွေနေ”ဆိုသည့် သတင်း။ သူမနေထိုင်ရာ ကျွန်းငယ်ကလေး၏ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာမို့ သူ ဖတ်မိမည် မဟုတ်တာ သေချာပါသည်။
ခုတော့ တကယ်ကိုပဲ သူမတို့ လွဲခဲ့ကြပြီ။ ချိန်းဆိုထားသော လေဆိပ်မှာ သူ စောင့်နေခဲ့မည်လား၊ သို့မဟုတ် သူမ အိပ်မက်ထဲကလိုပဲ သူ နောက်ကျ၍လွဲကြရမည်လား။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ၊ ခုတော့ လွဲခဲ့ကြရပြီဖြစ်သည်။
အခန်းထောင့်မှာ ထောင်ထားသော ညာဘက်ခြေတုကလေးဆီ အကြည့်တို့ရောက်စဉ် သူမနှလုံးသားတို့ နင့်ကနဲ စူးအောင့်လေသည်။ ဆောက်တည်ရာ မရနိူင်စွာ…။ ပြတင်းဘောင်ပေါ် မျက်နှာအပ်မှောက်ချလျက် သူမ ငိုကြွေးမိပြန်သည်။
သူမ အရောက်သွားချင်ခဲ့ပါသည်။ သူ့အနားကို… မြစ်တစင်းနှင့်တူသော သူ့အနားကို...
ကျန်ရစ်ခဲ့မည်မှန်းသိလျက်နှင့် ငေးမောလွမ်းဆွတ်ခွင့်အတွက် သူမ အရောက်သွားချင်ခဲ့သည်လေ…။ သူမစိတ်နှလုံးထဲတွင်မတော့ သူမသည် သစ်တပင်အဖြစ်နှင့် သူ့အပါး မတ်မတ်ရပ်ဆဲ၊ မျှော်ကြည့်ဆဲ၊ သူ့နောက်ကျောအား ငေးမောလွမ်းဆွတ်ဆဲမှာ….၊
အပြင်ဘက်မှာတော့ တကျော့ပြန်မိုးက သွန်း၍ သည်း၍ စွေရွာတော့မည့်ဟန်ပေ…။